ငါ RentaCar Club အပေါ်တစ်ဦးကားငှားတဲ့အခါမှာအကြှနျုပျ၏ခရီးစဉ်အာမခံထားသလဲ?
ဟုတ်ပါတယ်, အာမခံဒီတော့အားလုံး RentaCar Club ငှားရမ်းခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အာမခံမိတ်ဖက်, Viriyan ဖြင့်ဖုံးလွှမ်းနေသောကားတစ်စီးပိုင်ရှင်၏ငှားရမ်းခစျေးနှုန်းများတွင်ပါဝင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အာမခံဖုံးလွှမ်း:
ပြည်တွင်းစစ်နှင့်တတိယ (ပြဌာန်းချက်အာမခံ၏ 100% သေချာတရားရုံးကုန်ကျစရိတ်များသို့မဟုတ်အခြားသူများအားလျော်ကြေးငွေ; အခြားမည်သည့်အာမခံမော်တော်ယာဉ်များနှင့်စပ်လျဉ်း 1,000,000 လျော်ကြေးပမာဏကိုမှ 100% အထိ) ပါတီတာဝန်ယူမှု
အဆိုပါလွှမ်းခြုံကားရဲ့တန်ဖိုးကန့်သတ်သည်။ ဤသည်အသစ်သောမော်တော်ယာဉ်များ၏တန်ဖိုးနှင့်အမှုပေါ် မူတည်. လက်ရှိစျေးကွက်တန်ဖိုးပါဝင်သည်။ အပြည့်အဝအာမခံအသုံးအနှုန်းများကြည့်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကိုထုတ်စစ်ဆေးပါ။